अख्तियार « Nagarik Khabar
अख्तियारले भन्योः स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी अनियमितता
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहबाट हुने काममा सबैभन्दा वढी अनियमितता हुने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको स्थानीय तहमा हुने गरेको
चितवन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडाले भरतपुर महानगरपालिका–२५ को वडा कार्यालय र राप्ती नगरपालिकामा छापा मारेको छ । भरतपुर–२५ का वडाध्यक्ष विजयकुमार भुजेलविरुद्ध भ्रष्टाचारको उजुरी परेपछि अख्तियारले सोमबार वडा
पर्सा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडाबाट खटिएको टोलीले वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा आज छापा मारेको छ । अस्पतालद्वारा सञ्चालित फार्मेसीमा करोडौँको आर्थिक अनियमितता भएको उजुरी परेपछि छापा मारेको आयोगको हेटौंडास्थित
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथको जलहरी खरिद प्रक्रियाबारे छानबिन शुरु गरेको छ । स्रोतका अनुसार विरोधका बीच पनि गत फागुन ११ गते पशुपतिमा राखिएको सुनको जलहरी खरिद प्रक्रियामा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेवाग्राहीसँग घुस लिएको अभियोगमा वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका तीनजना कर्मचारीलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । फर्म दर्ता प्रमाणपत्र लिन सेवाग्राहीसँग ८
अख्तियारका आयुक्त डा. जोशीले दिए राजीनामा
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले राजीनामा दिएका छन् । नेपालको संविधानबमोजिम आजदेखि लागू हुने गरी डा. जोशीले आयुक्त पदबाट राजीनामा दिएका हुन्
अख्तियार प्रवक्ता फेरिए
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रवक्ता फेरिएका छन् । आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी आयोगको प्रवक्तामा सहसचिव नारायण प्रसाद रिसाललाई तोकिएको छ । यसअघि आयोगको प्रवक्तामा तारानाथ अधिकारी थिए
अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन : कर्मचारी सबैभन्दा भ्रष्ट, सामान्य प्रशासन र प्रदेश २ का उजुरी धेरै
काठमाडौं । अख्तिायर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारीहरु सबैभन्दा बढी भ्रष्ट भएको बताएको छ । आयोगले बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ३०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो तथ्याङ्क रहेको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रसहित मातहत कार्यालयको टोलीले चालु आर्थिक वर्षमा ३० वटा स्टिङ अपरेसन गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को साउन महिनादेखि कात्तिकसम्म गरेको विभिन्न
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबडिभिजन वन कार्यालय मुर्गिया रुपन्देहीका वन रक्षक प्रेमचन्द्र विश्वकर्मालाई रु १२ हजार घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ गरेको छ । पुर्जीवाला चिरान काठ ओसारपसार गर्न